उज्यालो सिम्ता बनाउने अभियानमा छौं – Yug Aahwan Daily
उज्यालो सिम्ता बनाउने अभियानमा छौं
युग संवाददाता । १५ पुष २०७७, बुधबार १८:०५ मा प्रकाशित
सुर्खेत जिल्लाको पूर्वीक्षेत्रमा पर्ने सिम्ता गाउँपालिका साविकको घोरेटा, काफलकोट, आग्रीगाउँ, बजेडिचौर, राकम, काप्रिचौर, डाँडाखाली र खानीखोला गरी आठ वटा गाउँ विकास समिति मिलेर बनेको गाउँपालिका हो । सिम्ता गाउँपालिकामा नौ वटा वडा छन् । गाउँपालिका भौगोलिक रुपमा विकट नै मानिन्छ । जनप्रतिनीधि आएको साढेतीन वर्षको अवधिमा सिम्ता गाउँपालिकामा के के परिवर्तन भए ? पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य र जनताको अपेक्षा अनुरुप काम भए वा भएनन् ? यीनै विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर हाम्रा सहकर्मी गीता थापाले सिम्ता गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष चन्द्रकला शाहीसँग कुराकानी गरेकी छन् । प्रस्तुत छ, कुराकानीको सम्पादित अंशः
हिजोआज कतिको व्यस्त हुनुहुन्छ ?
गाउँपालिकामा भइरहेका विकास निमार्णको अनुगमन गर्ने काम भइरहेको छ । गाउँपालिकाबाट दिने सेवा प्रवाहमा लागि परिरहेका छौं । यस्तै काममा व्यस्त छु ।
गाउँपालिकाको सेवा प्रवाहको अवस्थाबारे बताइदिनुस् न ?
२०७४÷७५ को गाउँसभाबाट हामीले तीन वटा लक्ष्य पारित गरेका थियौं । अहिले पनि हामी त्यही लक्ष्यअनुरुप काम गरिरहेका छांै । पालिकाको स्थानीय ऐन बनाएर हामीले जनतासँग सिम्ता गाउँपालिका, पहुँचमार्ग र उज्यालो सिम्ता भनेर लक्ष्य लिएका थियौं । त्यसै अनुरुप हामीले काम गर्दै अगाडी बढेका छौं । हामीले जनतासँग सिम्ता गाउँपालिका भनेर अभियान नै चलायौं । जनताको घरदैलो कार्यक्रम पनि ग¥यौं । वर्षमा एकपटक आँखा शिविर सञ्चालन, जेष्ठ नागरिकलाई औषधि वितरण गर्ने गरेका छौं ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई परिच पत्र वितरण गर्न शिविर नै सञ्चालन गरेका थियौं । यो वर्ष कोरोना भाइरसका कारण हामीले शिविर राख्न सकेनांै । जनताले भने सोधी रहनुहुन्छ ,अब कोरोना अलि साम्य भयो भने फेरी हामी शिविर राख्छांै । सुत्केरी महिलाका लागि उपाध्यक्षको कोशेली भन्ने कार्यक्रम राखेर सेवा दिइरहेका छौं । कोशेलीमा हामीले अण्डा, पोसिलो खानेकुरा, फलफुल र चारपटक स्वास्थ्य चौकीमा नियमित चेक गराएवापत स्वास्थ्य चौकीबाट चार हजार सातसय रुपैयाँ पनि वितरण गर्दै आइरहेका छौं । यो वर्ष पनि अर्काे महिनाबाट सुरु गर्दै छांै । वर्षमा दुई पटक यो कार्यक्रम राख्ने गर्छौं ।
अर्काे कुरा पहुँचमार्ग अभियान पनि सफल बनाएका छांै । हामी निवार्चित हुनुभन्दा अघि कहि पनि सडक पुगेको थिएन । कच्ची नै भए पनि हामीले नौ वटै वडामा सडक सञ्जाल जोडेका छौं । पहिलो वर्ष हामीले सडक सञ्जाल जोड्नकै लागि तीन करोड बजेट खर्च गरेका थियांै । हामीसँग स्थायी कर्मचारी नभए पनि करारमा कर्मचारी राखेर भए पनि जनतालाई सेवा प्रवाह गरिरहेका छौं । महिला दिदी बहिनीका लागि क्षमता अभिबृद्धिको तालिम पनि दिँदै आइरहेका छौं । बालविवाहविरुद्धको अभियान पनि चलायौं । हामीले महिला दिदी बहिनीहरुलाई ढाका तथा सिलाइबुनाईे तालिम दिएर अहिले उहाँहरुले काम पनि गरिरहनु भएको छ ।
यहाँको सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको गरिवी नै हो । गरिवीका कारण यहाँका युवाहरु भारत लगायत तेस्रो मुलुक जानुपर्ने बाध्यता छ । गरिवीकै कारण धेरैको घरपरिवार बिग्रिएको छ । गरिवीकै कारण आत्महत्याको घटना धेरै बढेका पनि छन् ।
समस्या समाधान गर्न के पहल गर्नुभयो ?
अब हामीले यस्ता समस्या समाधान गर्न जनतासँग सिम्ता गाउँपालिका अभियान सञ्चालन गरेका छांै । यसले केही हदसम्म जनतालाई सहज पनि बनाएको छ । स्थानीय तहले गर्न सक्ने जति काम गरेका छांै ।
संघ र प्रदेशका योजनामा कसरी समन्वय भइरहेको छ ?
संघ र प्रदेशसँग हाम्रो समन्वय भइरहेको छ । संघसँग हामी प्रत्यक्ष नजोडिए पनि प्रदेशसँग भने हामी प्रत्यक्ष जोडिएका छौं । प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा हामी स्थानीय तह पनि छलफल र समन्वयमा रहेका छौं । सल्लाह सुझाव दिने काम पनि भइरहेको छ । संघको कार्यक्रम त पालिकाको खातामा रकम आउँछ ।
युवालाई रोजगारीमा जोड्न के गर्नु भएको छ ?
हामीले कोरोनाका कारण वेरोजगार भएका युवाहरुका लागि गाउँपालिका मै रोजगारीको सिर्जना गरेका छांै । प्रधानमन्त्री स्वरोजगार, मुख्यमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमहरु अन्तर्गत हामीले युवालाई रोजगारी दिँदै आइरहेका छौं । तीन हजार युवाहरु पालिकामा फर्किनु भएको थियो । अहिले त फेरी धेरै युवाहरु भारत तथा तेस्रोमुलुकमा पनि गइसकेका छन् । यहाँ हुनुभएको युवालाई भने हामीले रोजगारी दिइरहेका छौं । गाउँपालिकाबाट पनि टोलटोलमा विकास निमार्णका कामहरु भइरहेका छन् । त्यसले पनि युवालाई रोजगारी सिर्जना गरेको छ । गाउँटोलमा खानेपानीको धारा, स्वास्थ्य र विद्यालयका भवनहरु निमार्ण हुने काम भइरहेको छ । युवाहरु यसैमा लाग्नु भएको छ ।
नेकपा विभाजनबारे तपाइँको धारणा के छ ?
हामी स्थानीय तहमा रहने कार्यकर्ताले यसै भन्ने अवस्था छैन । पार्टीका शिर्ष नेताहरुको विवाद हो समाधान पनि होला । तर हामीले अहिले पार्टी नै फुट्न लाग्यो भन्न मिल्दैन । पार्टी हो मनमुटाप भइहाल्छ । छिट्टै समाधान पनि होला भन्ने विश्वास छ । जनप्रतिनिधि हौं, हामीमा चिन्ता त छ । तर पार्टी फुट्नु हुँदैन ।
अबको योजना के के छन् ?
हाम्रो योजना भनेको गाउँसभाबाट पास भएका तीन लक्ष्य पुरा गर्ने नै हो । केही पुरा गरिसकेका छौं । अब केही पुरा गर्न बाँकी छन् । त्यसैलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर काम गर्ने योजना छ । हाम्रो सिम्तामा सबैभन्दा ठुलो योजना भनेको सिम्ता उज्यालो कार्यक्रम अघि बढेको छ । सडक सञ्जाल सबै वडामा पुगी सकेको छ । अब बाटोलाई पिच गर्ने, नाला निमार्ण गर्ने र स्तरोन्नती गर्ने छौ । हाम्रो पालिकामा जनता शिक्षाको पहुँचभन्दा बाहिर कोही पनि नहुन, स्वास्थ्य सहज रुपमा पाउन सकुन् भनेर विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौं । सामुदायिक विद्युतीकरण विस्ता गर्न २५ करोडको परियोजना परेको छ । सबै वडामा पोल गाडेर तार तान्ने काम भइसकेको छ । अब छिट्टै वत्ती बाल्ने छौं ।